Sheekada filimka Kaala: Haddii aad tahay taageero Superstar Rajini filimkan kama caajisi doontid – Filimside.net
Superstar Rajinikanth wuxuu caan ku yahay inuu taageerayaashiisa mada daaliyo markaana wuxuu la yimid Kaala oo ah filim mada daalo dhameestiran leh inkastoo nolosha Gaangester-nimo fariin ahaan ku xoogan tahay filimkan.
Jilaayaasha filimkan Rajinikanth, Huma Qureshi, Nana Patekar, Easawari Rao, Anjali Patil, Pankaj Tripathi, Manikandan.
Qiimeynta Fariinta Filimka Kaala: 3/5 (Sedex xidig)
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Kaala: Bandhiga Rajini inaba caadi ma ahan, sidoo kalena fariintiisa waa mid waafi ah oo si wacan loo xardhay qof walbana fahmi karo.
Muxuu Ku Liitaa Kaala: Heeso badan oo aan loo baahneyn, waqti ahaan inuu aad u dheer yahay iyo deg deg badan inay ka muuqato madaama filimkan si wacan loo faaf reebin.
Fariinta Filimka Kaala Oo Kooban: Karikaalan aka Kaala (Rajinikanth) waa nin qalbi jilicsan una naxo dadka masaakiinta ah kaasi oo u istaagayo inuu caawiyo dadka taagta daran ee dhulkooda laga saaray sidoo kalena xad gudub dad ban iyo mi muuqdo uu ku haayo siyaasiga dantiisa wax walbo ka hormariyo Hari Dada (Nana Patekar).
Dadka ku nool deegaanka carshaanta ah Dharavi ayuu u taagan yahay Kaala (Rajinikanth) inuu difaaco wuxuuna dagaal la galaa siyaasiga awooda badan Hari Dada (Nana Patekar) oo rabo inuu dadka nabaad guuriyo deegaankana mashruuc isaga dan ugu jirto ku qabsado.
Hari Dada (Nana Patekar) wuxuu rabaa carshaanta Mumbai oo dhan in la xaaqo sidoo kalena dhismayaal dhaadher lagu badalo kuwaas oo mashaariic kala duwan lagu qabsan karo waxayna dantiisa tahay dhismaha in ahmiyada la siiyo balse dadka taagta daran dhulka lagu daro.
Haddaba Hari Dada (Nana Patekar) oo aan naxin dantiisa kaliyana ka fikiro iyo Kaala (Rajinikanth) oo dantiisa tahay inu masaakiinta difaaco maxaa kala qabsan doono ayaa qaybaha dambe filimkan loo daawan doonaa.
Fariinta Filimka Kaala Maxaa Laga Yiri: Director PA. Ranjith marnaba ma uusan niyad jebinin taageerayaasha Super Star Rajini asigoo u sameeyay door xiiso badan oo Rajini si wacan loogu diyaariyay hadalada uu adeegsano iyo qaab jiliinkiisa guud.
Balse Kaala fariin ahaan deg deg badan ayaa ka muuqato waana filim fariintiisa qaybah gaar la adkeyn inkastoo Rajini si heer sare u matalay sidoo kalena ma ahan fariin cusub waa fariimahii koonfur Hindiya horey u sameyn jireen.
Bandhiga Jilaayaasha: Inaba caadi ma ahan Thalaiva Rajinikanth maba loo maleeyo 67-jir sida uu u xarkeenayo, Action-mada uu sameenayo iyo doorkiisa sida weyn kuu raali galinaayo kani waa Superstar yaqaan sida daawadayaasha loo soo jiito si wacana wuu ugu xarakeeyay filimka Kaala.
Nana Patekar isagana doorkiisa wuu ka baxsaday inkastoo muuqaalo badan uusan filimka Kaala ku laheyn haddana doorkiisa waa mid adag.
Waxaa xiiso gaar ah leh dagaalka hadalka iyo gacanta ee dhex maraayo labada ruug cadaa Rajin iyo Nana waana waxyaabaha qaar ee filimkan xiiso sare u yeelayaan.
Gunaanad: Kaala kuma niyad jebin doono haddii aad taageero Rajinikanth tahay sidoo kalena haddii aad jeceshahay fariimaha aflaanta Koonfur Hindiya ee arimaha dhulka iyo masaakiinta ku saabsan laakiin haddii aad fariin cusub baadi goob ugu jirtay kuma qancin doono mashruucaan Rajini ku xarakeeyay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Kaala ee Superstar Rajinikanth siweyn ugu xarakeeyay: